5000 Ks telephone card Lucky draw every day ﻿
5000 Ks telephone card Lucky draw every day
Tags: card job myanmar work.com.mm myjobs
www.jobless.com.mm သို့သွားပြီး လူကြီးမင်း၏ CVကို တင်ပါ။ ထို့နောက် လူကြီးမင်းတို့၏ CV ကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အရေးကြီးသော အချက်အလက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဖို့မမေ့ကြနဲ့အုံးနော်(ဓာတ်ပုံ၊ ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ဝင်စားမှု စသည်)
ယခု CV အကောင်းဆုံးဖြည့်သူတိုင်း နေ့စဉ် ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကဒ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအကောင်းဆုံးဖြည့်လေ လူကြီးမင်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးပိုများလေဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းကဒ် ကံစမ်းမဲကို July လကုန်သည်အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၁၈ ရက် အတွင်း ကံစမ်းမဲများကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
www.jobless.com.mm တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး CV အကောင်းဆုံးဖြည့်သူတိုင်း ကျွနု်ပ်တို့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ပြုလုပ်တိုင်း ပါဝင်နိုင်သည့် ကြီးမားသည့် အခွင့်အရေးများကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
P.S : www.jobless.com.mm တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ CV ကို ဖြည့်ထားခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအား ရန်ကုန်နှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလုပ်ရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အခြေစိုက် လုပ်ငန်းရှင်များမှလည်း လူကြီးမင်းအား အလုပ်များကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
www. Jobless.com.mm တွင် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် CV မှာ ဓာတ်ပုံ၊ ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အခြားသောအတွေ့အကြုံများနှင့် အောင်မြင်မှုများ ကို ဖြည့်ထားသည့် CV ကို ဆိုလိုပါသည်။
Just go to www.jobless.com.mm and register your CV there. Try to make it look good, do not forget important facts (picture, education, experience, interests etc.).
Every one who will do it now, may win every day 5000Ks for telephone card. Sooner you will fill out your CV the more chance you have to win. We will make lucky draw until end of July , so have 18 times to chance to win.
Do not miss that opportunity and double your chances for next big promoition, too.
Those who have the CV already registered have the double chance to win in every running promotion.
Good luck and findabetter job for better life.
PS: By registering your CV with Jobless.com.mm you increase your chances to be chosen by hundreds of our registered companies. You can be offered jobs in Yangon and the whole Myanmar, plus we have occationally international jobs, too.
Everybody who has registered CV with us (ofagood quality = picture, education, experience and other fields filled out) has double chance to win in our never ending spree of promotions.